I-Forex Education Centre | I-FXCC
IZINHLOKO EZIKHUTHAZAYO ZOKUQALA
Njengoba uqala uhambo lwakho lokuhweba, kubalulekile ukujwayele
kanye nezinzuzo zokuhweba kwe-ECN, futhi silapha ukuzokusiza.
Yini okudingeka ukwazi lapho uhweba Forex
Hlola lezizinto eziyisisekelo ze-forex futhi uziphe amandla ngokwakha ukuhweba okunolwazi
Funda ukuthi kungani i-ECN ikusasa lamaMakethe angaphandle.
Uyini umehluko phakathi kwalezi zibonelo ezimbili kanye nezinzuzo ze-ECN kuletha abathengisi?
Yazi kahle izibambiso zemali eziyisisekelo nezici zazo.
Ukuqonda i-rollover kubalulekile ukwenza izibalo zakho zilungile.
Funda ukuthi ukuqhuma kwenzeka nini futhi kungayithinta kanjani ukuhweba.
Kungani kubalulekile ukuqonda ngokugcwele umqondo wekhasi lapho uhweba Forex?
Funda indlela yokuqhuba ngempumelelo ibhizinisi nge-FXCC futhi uqonde imikhiqizo yethu.
Ama-eBooks e-Forex e-Forex
Thuthukisa ukuhweba kwakho ngokukhethwa kwezincwadi ze-forex, ukunikeza isiqondiso nokuqonda imiqondo esemqoka yokuhweba
BHEKA BONKE ama-eBOOKS
Vula i-akhawunti ye-ECN yamahhala namhlanje! Qala ukuhweba nomthengisi ohlangothini lwakho!
Yini eqhuba emakethe? Thola ulwazi ngezenzakalo zezomnotho zomhlaba ezithinta ukunyakaza kwemakethe.
Inani elikhulu kakhulu lisetshenziswe esikhungweni semfundo ye-forex ngokulandelana
ukuqinisekisa ukuthi kunomqondo ohlukile futhi ukwandisa amaklayenti ethu ulwazi.
- Izisekelo ze-Forex - Ukuhlaziywa kwe-Forex - Isu le-Forex
Izifundo zokuhweba nge-forex
- Wabasaqalayo -Phakathi
- Iya kuGlosari
Thola izimpendulo zemibuzo evame ukubuzwa mayelana nesimo sethu sebhizinisi noma ukuhweba ngokujwayelekile.